၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း - တစ် CCNP Wireless ကလက်မှတ်ရ Professional ကဖြစ်လာလုပ်နည်း
တစ်ဦး CCNP Wireless ကလက်မှတ်ရ Professional ကဖြစ်လာရန်အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
CCNP ကြိုးမဲ့လက်မှတ်ရ Professional က
CCNP Wireless ကလက်မှတ်ကဘာလဲ?
1 Step: သင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုယူအရည်အချင်းပြည့်မီသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ကိုကြည့်ပါ
အဆင့် 2: အအောင်လက်မှတ်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး
အဆင့် 3: အလက်မှတ်သက်တမ်းတိုး
Cisco သည်နှင့်တူမြောက်မြားစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ကမ်းလှမ်း CCNA နှင့် CCNP။ မှစ. CCNP ယင်းထက်အဆင့်ကိုမြင့်မား CCNAဒါကြောင့်ပိုပြီးရှငျးမလငျးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်ခေတ္တခဏတောင်းဆိုပါသည်။ ကြိုးမဲ့လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပျက်မှုရှိသင့်ပါတယ်လျှင်, ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အယူဆချက်ဟာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကြိုးမဲ့ကွန်ယက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဘို့အကာထူထောင်ရေးထုတ်လုပ်အသုံးပြုသွားမည်နေကြသည်။ သင်ယူမှုအတွက်လက်မှတ်တဆင့်တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူအဆိုပါပညာရှင်များကိုထိထိရောက်ရောက်တစ်ဦး functional တပ်ဆင်ခသို့စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တစ်ဦးအနက်စေနိုင်သည်။ ယခုအသေးစိတ်အတွက် CCNP Wireless ကလက်မှတ်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုအပေးပါ။
အဆိုပါ Cisco Certified Network မှ Professional ကကြိုးမဲ့လက်မှတ် Cisco သည်ပစ္စည်းများကိုအသုံးချဖို့ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် concentrates ။ ဒါဟာဖြစ်ပေါ်နေသောလုပ်ငန်းအကောင့်သို့ယူလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ 2009 အတွက်ခင်မင်သိကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် Cisco သည်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များလုံခြုံရေးနှင့်စုံစမ်း, conveying, အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကိုဖုံးလွှမ်း။
CCNP Wireless က , site ကိုလေ့လာမှုများ directing client ကိုလိုအပ်ချက်လေးလည်း, ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များကွပ်မျက်, ကြိုးမဲ့ LAN အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်မြောက်မြားစွာသည်အခြားပုံမှန်မဟုတ်သောပြည်နယ်အချက်များလုံခြုံရေးနှင့်တူဘာသာရပ်များပြန့်နှံ့။ ဒီလက်မှတ်ရှိခြင်းပညာရှင်များလက်ပေါ် Cisco သည်၏ကြိုးမဲ့ gadgets နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှု propelled ပြီးလျှင်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရိပ်မိနေကြပါတယ်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အများနှင့်မြင့်မားသောလစာများအတွက်ရှာဖွေပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားသောအောက်ရှိလက်မှတ်ယူနိုင်ရန်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ:CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
ကွန်ယက်ကို draftsmen, ကွန်ယက်မန်နေဂျာနှင့်ကွန်ယက်အထူးကုနဲ့တူကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ပညာရှင်များမိမိတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက်လက်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤအရာထူးရှာနေကြသူအဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလုပျအတှကျဆကျနှယျအဖွင့်အဘို့အသိသာအရည်အချင်းပြည့်မီတက်လေဤရွေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအလုပ်အကိုင်အတွက်နှစ်ပေါင်း 20 နှင့် 2008 အကြား 2018% ကျော်အားဖြင့်တိုးလိမ့်မည်ဟုအကဲဖြတ်သည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကဒီလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထိုသို့အကျိုးရှိအောင် 30 န်းကျင်ဖြစ်အပေါ်သို့မှီခိုနေပါတယ်။ အနာဂတ်သူတို့ကလက်မှတ်ရဖို့တစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်လာမယ့်အလုပ်အတွက်အဖွင့်တဲ့တစ်တန်မြင်သည်။
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရရန်လိုအပ်နေပါသည်သောသူတစုံတ CCNA Wireless ကသို့မဟုတ် CCIE အောင်လက်မှတ်တစ်ခုခုဖုံးရမည်။ ဤသည် CCNP ၏ကြိုးမဲ့လက်မှတ်ဆည်းပူးဖို့ဆိုလို, သူသို့မဟုတ်သူမပထမဦးဆုံး Cisco Certified Network Associate Wireless ကယူဒါမှမဟုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် Cisco Certified Internetwork Expert လက်မှတ် မည်သည့်လမ်းကြောင်း၌တည်၏။
ကြိုးမဲ့လက်မှတ်လေးစာမေးပွဲဖြေရှိပါသည်။ ဤ 642-731 CUWSS, 642-741 IUWVN, 642-746 IUWMS နှင့် 642-736 IAUWS ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲများတစ်ခုချင်းစီတစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းကိုလက်စသတ်ရမည်လိပ်စာများ 50 မှ 60 ပါရှိသည်။ တိုင်းစာမေးပွဲတွင်အဘို့,5ရက်ပေါင်းတစ်သင်တန်းလည်းမရှိ။ ဤရွေ့ကားသင်တန်းများ, ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုထူထောင်ကြိုးမဲ့ local area network အုပ်ချုပ်ရေးကျော် Voice ကိုများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များထည့်သွင်း, သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူအကျိုးကျေးဇူးနဲ့စိတ်ကူးအန္တရာယ်များဆန့်ကျင်ကွန်ယက် secure ဖို့ပြိုင်ဘက်ကိုပွငျဆငျ။
ကကမ်းလှမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မှတ် Cisco သည် ရုံသုံးနှစ်ကြာတဲ့အချိန်အထိဘို့သိသိသာသာရှိနေမည်။ ဒီခေတ်ပြီးနောက်, လက်မှတ်ချုံးနှင့်ပဋိညာဉ်ကိုင်ဆောင်သူပြန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားသာချက်များများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားစောင့်ရှောက်ဖို့ Re-လက်မှတ်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ သူက browse မှလေးခုရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါလက်မှတ်အဆုံးသတ်သို့မဟုတ်လက်ရှိ CCIE စာမေးပွဲကိုမဆိုလွန်သွားသင့်တယ်မတိုင်မီသူမဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုစာမေးပွဲသငျ့သညျ။ တတိယကအခြားရွေးချယ်စရာယခုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ညာဘက်ရှောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Cisco Certified ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်သူ (CCDE) မြေကြီးတပြင်စာမေးပွဲဆင်းရေးစပ်သို့မဟုတ်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုသွားတော်အပေါင်းတို့နှင့်အောက်ပိုင်းအဆင့်အထိအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အဘို့သူ့ကို-အတည်ပြုပြန်လည်ဖြစ်သော Cisco Certified Architect (CCAr) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
CCNP Wireless က စာမေးပွဲဖြေဆိုတာပြိုင်ဖက်နယ်မြေ၌ကြီးသောအခြေစိုက်စခန်းရှိသည်ဖို့်၏လိုအပ်သည်ထားတဲ့ပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတစ်ချိန်ကသူတို့တစ်တွေစစ်မှန်တဲ့ကွန်ရက်အခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် functional ဖြစ်စေနှစ်ဦးစလုံးသင်ယူမှုပါဝင်သည်။ ဒါကဘာပဲလက်အပေါ်သူတို့ကလက်မှတ်မှတဆင့်ရှိစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ထားမည်။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ:အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီများလုံခြုံရေးပညာရှင်များနှင့် admin CEH လက်မှတ်တောင်းဆိုသလဲ?
CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
CCNP ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. သိအရေးကြီးအရာ